आइओई स्नातक तहको पाठ्यक्रम र मूल्यांकन प्रक्रिया परिमार्जन हुँदै - Engineers Post
अस्मिता खड्का June 12, 2021
शैक्षिक क्यालेन्डरअनुसार यतिबेला इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान (आइओई)ले अनलाइन कक्षाहरू सञ्चालन गरिरहेको छ । आइओईअन्र्तगतका स्नातक र स्नातकोत्तर दुवै तहका अनलाइन कक्षाहरू गत वैशाख १६ गतेदेखि सञ्चालन भइरहेका छन् ।
परीक्षाको सन्दर्भमा भने कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे विचार भइरहेको आइओईका सहायक डीन प्रा.डा. शुशील वज्राचार्यले इन्जिनियर्स पोस्टलाई बताए । ‘लकडाउनको अवस्था सामान्य रहेमा भौतिक रूपमा परीक्षा सञ्चालन गर्छौं, लामो समयसम्म अवस्था सामान्य नरहेको खण्डमा वैकल्पिक माध्यमबाट परीक्षा सञ्चालन गर्न पनि हामी तयार छौं,’ उनले भने, ‘भौतिक तथा अनलाइन जुनसुकै माध्यमबाट परीक्षा भए पनि परीक्षा हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै तालिका निकालिन्छ । यसपटक गत वर्षजस्तो अनलाइन कक्षा सञ्चालनमा समस्या छैन । वैशाख १६ गतेदेखि अनलाइन कक्षाहरू पनि धमाधम सञ्चालन भइरहेका छन् ।’
स्नातक तहको पाठ्यक्रम परिमार्जन
आइओईले स्नातक तहअन्तर्गत इन्जिनियरिङ र आर्किटेक्चरको पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्ने भएको छ । यसका लागि आइओईले फाउन्डेसन तयार पारिसकेको छ । आइओईले अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयसँग आइओईको पाठ्यक्रम तुलना गर्दै बजारमुखी र व्यवहारमुखी हुने गरी हालको पाठ्यक्रमलाई परिमार्जन गर्दै शैक्षिक कार्यक्रम अघि बढाउने भएको हो । आइओईमा इन्जिनियरिङ र आर्किटेक्चरको जम्मा १२ वटा कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । आगामी शैक्षिक शत्रदेखि लागू हुने गरी सबै पाठ्यक्रम परिमार्जनको खाका तयार पारिएको सहायक डीन प्रा.डा. वज्राचार्यले जानकारी दिए ।
‘पाठ्यक्रम परिमार्जन सम्बन्धी खाका र मापदण्ड लकडाउनअघि नै बनिसकेको छ । स्नातक तहका सम्पूर्ण कार्यक्रमका लागि रिभिजन अपडेट गर्ने तयारी भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘विद्यार्थीलाई पढाउने सबै कोर्सहरू बजारमुखी नै छन् । अहिलेसम्म १२ वटा कोर्समध्ये ३ वटामात्र व्यवहारिक (इन्टर्न) मा अधारित छन् । अब परिमार्जित हुने स्नातक तहका सबै कोर्समा इन्टर्नको व्यवस्था हुनेछ । परिमार्जित पाठ्यक्रम आगामी शैक्षिक सत्रदेखि लागू हुनेछ ।’
आइओईले हालसम्म आर्किटेक्चर, मेकानिकल र केमिकल इन्जिनियरिङमा मात्र इन्टर्नको व्यवस्था गर्दै आएको थियो । एक वर्षको समयावधिमा परिमार्जित कोर्स कसरी सञ्चालन गर्ने भन्नेबारे अभ्यास हुनेछ । आगामी वर्षदेखि विद्यार्थीले परिमार्जित नयाँ पाठ्यक्रम पढ्न पाउनेछन् ।
प्रतिशत विधि हटेर ग्रेडिङका आधारमा मूल्यांकन गरिने
आगामी शैक्षिक सत्रदेखि लागू हुने गरी आइओईले परीक्षाको मूल्यांकन र कक्षा सञ्चालन प्रणालीमा पनि परिवर्तन गर्ने भएको छ । जसअनुसार आइओईले प्रतिशतमा आधारित मूल्यांकन हटाएर ग्रेडिङ अर्थात् सिजीपीए प्रणालीमा परीक्षाको मूल्यांकन गर्ने, कक्षा सञ्चालन क्रेडिटको आधारमा गर्ने गरी शैक्षिक कार्यक्रम अगाडि बढाउने भएको हो । आइओईले स्नातक तहमा हालसम्म प्रतिशतको आधारमा विद्यार्थीले दिने परीक्षाको मूल्यांकन गर्दै आएको छ भने कक्षाहरू घण्टाका आधारमा सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
‘स्नातक तहको नतिजा अहिलेसम्म पूर्णाङ्क सयको आधारमा मार्किङ गरिँदै आएको थियो भने प्रतिशतको आधारमा नतिजा प्रकाशित गरिन्थ्यो । तर, अब आगामी शैक्षिक सत्रदेखि लागू हुने गरी सिजीपीए प्रणालीको आधारमा विद्यार्थीको मूल्यांकन गरिनेछ’ उनले भने, ‘साथै अहिलेसम्म हाम्रा सबै कोर्सहरू आवर सिस्टममा छन् । आगामी वर्षदेखि क्रेडिट प्रणालीमा सञ्चालन हुनेछन् । अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक प्रणालीअनुसार घण्टाको हिसाबमा सञ्चालन हुने कक्षाहरू क्रेडिटमा कन्भर्ट हुनेछन् । स्नातकोत्तरमा भने यो सिस्टम लागू भइसकेको छ ।’
साथै हालसम्म सञ्चालन गर्ने स्नातक तहको परीक्षा प्रणाली पनि परिमार्जन गरिने सहायक डीन वज्राचार्यले बताएका छन् । ‘अहिले हामीले सञ्चालन गरिरहेको परीक्षामा निकै दबाब छ’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म इन्टरनल परीक्षा २० अंकको र फाइनल परीक्षा ८० अंकको हुन्छ । आगामी शैक्षिक सत्रदेखि सञ्चालन हुने परीक्षा भने ४०÷६० अंकको हुनेछ । विद्यार्थीले आन्तरिक परीक्षामा ४० अंक र फाइनल परीक्षामा ६० अंक ल्याउनुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म विद्यार्थीहरू सैद्धान्तिक बढी भए, कम व्यवहारिक र क्षमता बढाउन हामीले नयाँ प्रणालीको आधारमा मूल्यांकन गर्दैछौं ।’
उनकाअनुसार यस्तो मूल्यांकन प्रक्रियाले शिक्षकको बढी मूल्यांकन हुनेछ भने विद्यार्थीमा व्यवहारिक ज्ञान बढ्नेछ । यसअघि अन्तिम चरणमा मात्र मूल्यांकन हुने गर्थ्यो । अहिलेसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम ‘व्यवहारिक कम र सैद्धान्तिक बढी’ प्रणालीमा आधारित थियो । विद्यार्थीहरूमा व्यवहारिक ज्ञान बढोस् र उनीहरूले बजारमा सहजै जागिर पाउन सकुन् भन्ने उद्देश्यले आइओईले यस्तोखाले मूल्यांकन प्रणालीअघि बढाउन लागेको हो । यो वर्षभित्रमा माथि भनिएका सबै विषयवस्तुहरू अपडेट गर्ने कार्य हुनेछ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको फ्याकल्टी बोर्ड र एकेडेमिक काउन्सिलबाट पास गरिसकेपछि आगामी वर्षदेखि परिमार्जित नयाँ शैक्षिक कार्यक्रमहरू लागू हुनेछन् ।
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा तोडफोडमा संलग्न विद्यार्थीलाई कानूनी कारबाही गर्न माग
इन्जिनियरलाई किन सैद्धान्तिक मात्रै नभई नीति, कानुन, आचारसंहिताको ज्ञान हुन जरुरी छ ?
लोक सेवा आयोगले सार्वजनिक गर्यो इन्जिनियरिङ सेवातर्फको नतिजा